Akhriso Xog Cusub Oo Laga Helayo Weerarkii Naf Hurnimada Ee Ka Dhacay Afgooye. – Calamada.com
Akhriso Xog Cusub Oo Laga Helayo Weerarkii Naf Hurnimada Ee Ka Dhacay Afgooye.
calamada May 23, 2018 2 min read
Xili shalay Mujaahidiinta ay Camaliyad istish haadi ah la beegsadeen kolonyo ciidamo Murtadiin ah oo kasoo baxay garoonka milatari ee Ballidoogle, kuna wajahnaa dhanka Magaalada Muqdisho ayaa waxaa soo baxaya warar dheeraad ah oo ku aadan khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee Cadowga ka soo gaaray Camaliyadaasi .
Kolonyada ciidamada ah ee la beegsaday ayaa ahaa murtadiinta loo yaqaano Bankaraf kuwaas oo ah Maleeshiyaat Murtadiin ah oo uu Maraykanku tababaray si uu ugu dhibaateeyo shacabka Muslimiinta ah ee Soomaaliyeed.
Maleeshiyada Murtadiinta ah ee la beegsaday ayaa marayay halka loo yaqaano Baar Ismaaciil ee Magaalada Afgooye, waxaa halkaas ka soo gaaray khasaare xooggan oo dhimasho iyo dhaawacba leh.
Ugu yaraan 12 ka tirsan Maleeshiyaatka Baankaraaf iyo saraakiishooda ayaa goobta ku dhintay, kadib markii gaari ciidan oo ay saarnaayeen ay camaliyadu gabi ahaanba burburisay.
Idaacadda Islaamiga ee Al-andulus ayaa heshay Magacyada qaara ka mid ah Saraakisha ku wax yooleewday Camaliyadii Shalay ka dhacday Degmada Afgooye .
Labo Sargaal oo ka mid ahaa Saraakiisha ugu sareysa Maleeshiyaadka Bangarafta ayaa dhaawacyo culus uu ka soo gaaray Weerarkii shalay.
Murtad magiciisa lagu soo koobay Aamin oo ahaa Taliyihii watay Ciidanka La weeraray ayaa waxaa soo gaaray dhaawac culus iyadoona xaaladaii laga deerinayo .
Sargaal kale oo magaciisa lagu soo koobay Mad jinoow ayaa isaguna ku dhaawacmay Camaliyadii shay iyadoona dhaawaciisuna yahay mid garaab Ah.
Dhawwacyada saraakiisha Murtadiinta ah ayaa loola cararay goobaha caafimaad ee Saliibiyiintu ku leeyihiin xeryaha milatari ee Magaalada Muqdisho, halkaas oo xaaladooda liidata lagula tacaalayo.
Maleeshiyaatka Baankaraaf ee camalaiyada ishtish-haadiga ah lagu beegsaday ayaa ku caan-baxay dhibaataynta dadka shacabka Muslimiinta ah xilliyada ay iyaga iyo Saliibiyiinta Maraykanku samaynayaan hawgallada Islaam la dagaalanka ah ee ay ka wadaan Wilaayaatka dalka Soomaaliya.
Dhacdadii ugu dambeysay ee Maleeshiyaatkaas ay ku luglahaayeen ayaa muddo laba isbuuc laga joogo kahor waxay ku dileen 5 qofood oo shacab Muslimiin ah kuwaas oo lagu laayay tuulada Macalinka ee duleedka degmada Afgooye.
Sidoo kale Maleeshiyaatkan ayaa kuluglahaa xasuuq shacab Muslimiin ah hore loogu geystay Deegaanka Bariire ee Wilaayada Shabeellad Hoose iyo tuulada Sheekh Axmad Yare ee duleedka Magaalada Jilib, halkaas oo Ciidamo Maraykanka ah iyo Maleeshiyaatkan ay ku laayeen dad Muslimiin ah.
Dhawaan ayay ahayd markii shabakada wararka Faays Niyuus ee saldhigeedu yahay wadanka Maraykanka ay qortay warbixin dheer oo ku saabsan Maleeshiyaatkan Murtadiinta ah ee uu Maraykanku tababaro saldhigooduna yahay Garoonka Balidoogle.
Shabakada Maraykanka ah ayaa sheegtay in Maleeshiyaatkaan aysan inta badan kasoo bixin Saldhiga Balodoogle ee sida aadka ah loo ilaaliyo, Cabsi laga qabo weeraro ay la beegsadaan Mujaahidiinta.
Previous: Shir Ka Dhan Ah Jihaadka Soomaaliya Oo Ka Furmay Magaalada Al Qaahira Ee Wadanka Masar.
Next: Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo 07-Ramadaan-1439 Hijri.